Ndụ dị ka akwa mmiri nke Hawaii
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Ndụ dị ka akwa mmiri nke Hawaii
Inweta njem nleta • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
by Dr. Anton Anderssen - pụrụ iche na eTN
dere Dr. Anton Anderssen - pụrụ iche na eTN
Na ala, mgbe ala na-ahụ onyinyo ya, a ga-enwe izu isii ọzọ nke oge oyi. Na Hawaii, mgbe flamingo hụrụ onyinyo ya, e nwere izu isii ọzọ nke paradaịs - ọkachasị maka anyị nnụnụ snow bi ebe a site na ekeresimesi ruo ụbọchị Ista. O were nleta iri atọ na itoolu na Hawaii iji chọpụta ebe kwesịrị ekwesị ibi dị ka ndị njem nleta n'oge. Anyị nyochara isi agwaetiti niile tupu anyị ekpebie na Oahu bụ nhọrọ ziri ezi. Dị ka m hụrụ ebe okpomọkụ n'anya, enweghị m ike ịhapụ akụ bara ụba dị ka ihe nkiri, opera, egwu egwu, nka mara mma, na nkuzi nke akụkọ ihe mere eme. Na mbu, m lere anya na Naalehu (na Big Island), ebe Mark Twain kụrụ osisi monkeypod n'akụkụ ebe ndịda-ọtụtụ isi na US. O di nwute, enwere m musystysthy, na Naalehu no ebe di anya n’ebe ndi okachamara MD no.
Oahu nwere'slọ Ọgwụ Queen, ebe ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrịa na-ahụ maka ndị ọrụ nkwarụ dị ka m. Na mbido, m lere anya n’obodo Laie, maka na m chọrọ ibi n’akụkụ ndị Mọmọn. Ahụ́ na-eru m ala ma mụ na ha nọrọ, ọ ga-abụrịrị n'ihi mmachibido iwu ha banyere izu ohi, ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ inụ, enweghị aghụghọ na ụdị omume ọjọọ ọ bụla. Ọ dịghị mgbe mmadụ na-ahụ ndị na-a panụ mmanya na-egbu mmanya na-emebi udo, ma ọ bụ ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ na mpaghara ahịhịa ha. Ọ bụ ezie na abụghị m Mọmọn, ihe na-adabara mụ na ha, dị ka m mere mgbe m bi n'ókèala Amish nke dị n'ebe ugwu Indiana.
M hụrụ Polynesian Cultural Center n'anya na Laie. Ulo akwukwo nke gụsịrị akwukwo na post-doctorate bu ihe omumu banyere ihe omumu, na ileta ndi nlere anya di ka umuaka na ulo ahia. M ga-ebi ebe ahụ ma ọ bụrụ na m nwere ike, na-agakọrịta n'etiti ndị ntụgharị okwu nketa, na-eme ememme ọdịnala bara ụba nke Polynesia. Ma ọzọ, obodo Laie dị nnọọ anya site na ọnọdụ ụlọ mberede mberede.
Gụọ akụkọ zuru ezu ebe a.
Dr. Anton Anderssen - pụrụ iche na eTN
Abụ m ọkà mmụta gbasara mmadụ gbasara iwu. Dọkịta m nọ n'iwu, akara ugo mmụta post-doctorate m bụ na mmụta gbasara ọdịbendị.
Akwụkwọ akụkọ njem LGBTQ kachasị iche iche nke ụwa ...